दिनेश भट्टका बुबाले गरे भागरथी भट्टको हत्या भएको दिन बारे यस्तो खुलाशा ! | सुदुरपश्चिम खबर
काठमाडौं । माघ २१ गते बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानीका दीपकराज भट्ट लवलेक सामुदायिक वन नजिकैको खोचलेक बजारमा दिनभर स्कूलको सामान लोड–अनलोड गर्ने काममै व्यस्त भए ।बेलुका १७ वर्षीया भा’गर’थी भट्टको ह’त्या भएको ल’वलेक सा’मुदायिक व’नहुँदै घर ला’गे । त्य’तिन्जेल घ’टनाको अ’त्तोपत्तो पा’एनन् । उनी घर पु’ग्दा छोरा पनि घरमै थिए ।छोराको ग’तिविधिमा कुनै प’रिवर्तन देखेनन् । भोलिपल्ट पनि खाना खा’एर काममै नि’स्किए ।त्यतिबेलासम्म घ’टनाको कसैले चा’ल पाएको थिएन ।
बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा सम्पन्न निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा करिब २ सयले सेवा पाए !!
बैतडीमा कोभिड १९ बिरुद्धको खोप ढुक्क भएर लगाउन स्वास्थ्य कार्यालयको आग्रह !!
दिउँसो त्यस्तै सा’ढे ४ भएको थियो । बजारमा ह’ल्ला सुने– ल’वले’क सा’मुदायिक वनमा श’व भेटियो ।दीपकराज पनि सा’मान लो’ड गर्ने काम छो’डेर ल’वले’क व’नतिरै ला’गे । त्य’तिञ्जेल उनले छिमे’की भा’गर’थीको श’व भन्ने प’त्तो पाएका थि’एनन् ।घ’टनास्थलमा पुगेका गाउँलेले भा’गर’थी हिजैदेखि ह’राएको आज शव फे’ला प’रेको जानकारी दि’एपछि त्यसदिन त्यतिकै बि’त्यो ।उनी काममा न’गई घर फर्किए, तर एकाएक एक मात्र आ’शाको त्या’न्द्रो नै चुँ’डिने गरी उनकै जेठा छोरा अ’भियुक्त भएको सु’नेपछि उनको सानो संसार त’हसनहस हु’नथाल्यो ।
प्रहरी कार्यालयमा पु’गेर छोरा भेटेपछि उनी झनै बे’चैन भएका छन्, किनकि छोराले भा’गर’थीको ह’त्या र ब’ला’त्का’र’को अ’भियोग स्वी’कार ग’रेको छ ।घरमा परिवारसँगै घ’टनाको बारेमा कुरा पनि भयो । घ’टना भएको तेस्रो दिन प्रहरीले आ’एर गाउँले लाई सो’धपुछ गर्न था’लेपछि मैले छोरा दिनेशलाई सो’धें– तैं’ले कसैलाई दे’खिस् ? केही सु’निस् कि ? तर छोराले केही भनेन ।‘मैले त देखेन, मैले गरेन’ भन्या । त्यसपछि म पनि ढु’क्क भएँ । तर घ’टना भएको १३ दिनको दिन प्रहरीले अ’परा’धीलाई सार्वजनिक ग’र्दैछ भन्ने जानकारी पाएँ ।
बजारमा अ’परा’धी पत्ता ला’ग्यो भन्ने ह’ल्ला च’ल्यो ।अ’पराधीको बारेमा ह’ल्ला चन्ने बि’त्तिकै मलाई त झ’ट्का लाग्यो । प्रहरीले अ’परा’धी सार्वजनिक गर्न ला’गेको मानिस मेरै १६ वर्षको छोरो दिनेश रहेछ । म त छाँ’गाबाट ख’से जस्तै भएँ ।उसले यति ठू’लो अ’पराध ग’र्न सक्छ भन्ने मलाई ला’गेकै थिएन । उसले गा’उँलेसँग भा’गर’थीको ह’त्या आफैंले ग’रेको स्वी’कार ग’रेको रहेछ तर मसँग चाहिं भेट भ’एन । प्रहरीले घ’टनाबारे बु’झ्न मलाई जिल्ला प्रहरी का’र्यालय बैतडी बो’लाए । म बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय आ’इपुगेको छु ।‘अहिलेसम्म त मलाई मेरो ब’च्चाप्रति शं’का थिएन ।
के भनौं म, मलाई त अहिलेसम्म वि’श्वास छै’न मेरो छोराले य’स्तो ग¥यो हो’ला भनेर । तर त्यो त कि ग’र्नेलाई थाहा हुन्छ कि भ’गवानलाई थाहा हुन्छ, मलाई के थाहा ?’प्रहरी का’र्यालय पु’गेका अ’भियु’क्तका बुवा दीपकराज भ’ट्टकै सा’मुन्ने प्रहरीले उनको छोरासँग व’यान लियो । बुवा दीपकले आफूसँगको भेटमा छोराले घ’टना आफूले नै घ’टाएको स्वी’कार ग’रेको बताए ।उनले भने– छोराले मे’रै सा’मु ‘मे’रै हा’तबाट ह’त्या भया हुन्’ भन्यो । ब’ला’त्का’र पनि ग’रेको हो भन्दैछ । छोराले नै गरेको भ’निसकेपछि प’त्याउनै प¥यो ।
तर अझै पनि मलाई मेरो छोराले त्य’स्तो ग’रेको हो जस्तो ला’गिराखेको छैन । ग’र्नेले हो भनेपछि मैले वि’श्वास न’गरेर पनि भ’एन !भा’गर’थीको आमाले छो’रीको ह’त्या दिनेशले ग’रेको हु’नसक्दैन भ’निरहेकी छन् । तर आ’रोपितले मैले नै हो भ’नेपछि अरूले न’पत्याएर के ग’र्ने ? उनलाई पनि अहिले यस्तै ला’गिरहेको छ ।दीपकराजले भने– खै कुन दिनको द’शाले यहाँ च’पेटमा प’स्यौं भनेर गाउँलेहरू पनि भ’निराखेका छन् । ज’सकी छोरी हो ती भा’उजूले पनि भ’निराखेकी छिन् यो मेरो छोरा हो । यो छोराले त अहिलेसम्म यस्तो ग’रेको हु’नसक्दैन भनेर भ’निराखेकी छन् ।
अब मे’रै छोराले मैले ग’रेको हो भन्छ त हामीले के भन्ने ?दीपकका अनुसार उ’नीहरूबीच पा’रिवारिक वि’वाद र रि’स’इ’बी केही थिएन । दिनेशले उ’ठाएको भनिएको पुरानो घ’टना हुँदा दीपकराज नै पाँच वर्षका थिए । दीपकले सुने अनुसार भा’गर’थीको बुबाले दि’दीलाई नराम्रो गरे’को भन्ने सु’नेको हो । त्यो बेलाको कुरा दिनेशको दि’मागमा कसरी आयो दीपक नै अ’चम्ममा छन् ।उनले भने– मलाई नै या’द न’भया कुरा उसलाई कसरी आयो ? त्यसपछि त पा’रिवारिक झ’गडा पनि भएको थिएन ।दिनेशले भने ९ कक्षादेखिको रि’सले भा’गर’थीलाई मा’रेको व’यान दि’एका छन् ।
उनका अनुसार दिनेशले ९ कक्षामा स्कूल जाँदा भा’गर’थीलाई गा’ली ग’रेको थियो । शि’क्षकलाई कुरा ल’गाएको भनेर बेला–बेला दुईजना बी’च झ’गडा हुने गरेको थियो ।भा’गर’थी नाताले दीपककी भतिजी हन् । दिनेश परिवारको जेठो छोरा हो । दीपकका अरू दुई छोरी र एक छोरा तीनै जना सु’स्त म’नस्थि’तिका छन् । दीपकराजलाई भ’रोसा भनेकै जेठो छोराको थियो, उसले भ’रोसा मात्र होइन सबै स’पना टु’टाइदियो ।दीपकराजले भने– प’ढेलेखेको भ’रोसा गर्ने यही एउटा छोरो थियो, यस्तो हा’लत भयो ।बारीको अन्नले ६ महिना भन्दा खान पुग्दैन, मैले म’जदूरी गरेर परिवार जो’गाउँदै यहाँसम्म ल्याएँ । आज यो हा’ल भ’इगो ।
दीपकराजका अनुसार दिनेश २०६१ मंसिर १४ गते ज’न्मिएका हुन् । उनको दा’बी अनुसार दिनेशको उमेर १६ वर्ष मात्र पुग्यो । काठमाडौंका कतिपय मिडियाले ग’लत प्र’चार गरेकोमा पनि दिनेशराजको मन दुः’खेको रहेछ ।जुन दिन प्रहरी कुकुर लि’एर आएको थियो, त्यो दिन दिनेश गो’रु लिएर गएको भन्ने कुरा झू’टो रहेको दीपकले बताए । जहाँ ला’श थियो त्यहीं आफ्नो छोरा पनि रहेको दा’बी ग’र्छन् उनी ।दीपकराजले भने– म पनि त्यहीं थिएँ । ऊ पनि त्यहीं थियो । गाउँका सबै जना त्यहीं थिए ।छोरालाई भेटें, हि’रासतमा राखेको रहेछ ।
प्रहरीले छा’नबिन ग’रिराखेको छ । छोराले मेरै सा’मु ‘मेरै हातले ह’त्या भया हुन्’ भन्यो । पा’रिवारिक वि’वादले भनेको कुरा किन भनेको हो, त्यो खै मलाई थाहा भएन । हामीप्र’ति परिवारमा त अहिलेसम्म वि’वाद र रि’स’इ’बी केही थिएन ।पुरानो घ’टना होला खै, म पनि पाँच वर्षको थिएँ । त्यो बे’लाको कुरा यसको दि’मागमा कसरी आयो, के आयो त्यो छो’डिदिनुस् । त्यसपछि त हाम्रो केही झ’गडा भएको थिएन ।छोराले भन्दैछ ९ कक्षामा स्कूल जाँ’दाखेरि मलाई गा’ली दिएको थियो । मा’स्टरलाई पनि कुरा ल’गाइदिएको थियो । म’सित भनेको कुरा मलाई रि’स उ’ठ्यो ।
अहिले ११ कक्षामा पढिराखेको छ । दुई वर्षदेखि रि’स उठेको थियो । गा’ली दि’न्थी र टि’चरलाई भ’न्दिन्थी । त्यही भएर मैले मा’रेको हो भन्यो । स्कूलमा बच्चाहरूसँग खे’ल्दा हो’ला, कतै जाँ’दा टि’चरलाई भ’न्दिएको होला ।भा’गर’थी ना’तामा मेरो दाइकी छोरी भतिजी हो । दाइ ना’ता लाग्छ उसको बाउसँग । दिनेश परिवारको जेठो छोरा हो । अरू दुई छोरी र एउटा छोरो छ । तर उनीहरू तीनै जना सु’स्त म’नस्थितिका छन् । तीनवटै बच्चाको कुनै भ’रोसा छैन । मेरो भ’रोसा भनेकै यही एउटा थियो ।प’ढेलेखेको, भ’रोसा ग’र्ने यसको पनि यस्तै हा’लत भयो ।आर्थिक अवस्था त्यस्तै हो । दिनभरि काम ग’रेर खा’ने हो ।
ह’ल्काफु’ल्का खे’तीकि’सानी हुन्छ । त्यतिले पुग्दैन, कि’नेर खाने हो । आफ्नो खे’तबाट पुग्दैन । कि’नेर पनि खा’न्छांै । म’जदूरी गरेर पनि ख’रिद गरेर ल्या’उँछौं ।मैले अब कसरी भन्ने, आफ्नो न’जरमा त्यस्तो थिएन । मे’रै न’जरमा मात्रै होइन गाउँकै मान्छेहरू पनि ते’रो छोरा यस्तो थि’एन भन्छन् । अहिलेसम्म यस्तो भ’रोसा गरेको थियो । खै कुन दिनको द’शाले यहाँ च’पेटमा प’स्यौं भनिरा’छन् गाउँलेले पनि ।जसकी छोरी हुन्, ती भा’उजूले पनि भ’निराखेकी छिन्– यो मेरो छोरा हो । यो छोराले त यस्तो गरेको हुनसक्दैन भ’निराखेकी छन् । अब मेरै छोरा मैले ग’रेको हो भन्छ त के भन्ने ? ब’ला’त्का’र पनि ग’रेको हो भ’न्दैछ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउन बैतडीमा तोकिए ४८ खोप केन्द्र!!
बैतडीमा डिआईजी सुबेदीको उपस्थितिमा प्रहरी–बिद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम सम्पन्न !!
आफ्नै छोराको हत्या गर्ने बैतडीका चन्दलाई मानसिक अस्पताल पठाइयो !!
कञ्चनपुरमा १४ वर्षीया बालिकामाथी यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ !
भ्यान दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका ४ जनाको शव ल्याउन खर्च नहुँदा ढिलाइ !!
मोटरसाइकल र जिप एक आपसमा ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु !!
प्रधानमन्त्री केपी ओली फेरि शक्तिशाली !
भावनामा पौडी खेली ईज्जत् लुट्नेलाई…..
तिमीले अमृत सम्झिएको जहर हुन सक्छ : धर्मानन्द भट्ट !!